Eshibhile ngokwezifiso ishidi laser ukusika izingxenye ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Inqubo yensimbi yensimbi ifaka ukusika kwe-laser, okusebenzisa kakhulu ama-lasers asebenza kahle ukuze aqoshwe futhi asikwe izinto. Imikhiqizo yensimbi yeshidi inezici zesisindo esincane, amandla aphakeme, ukuqhutshwa kukagesi, izindleko eziphansi, nokusebenza okuhle kokukhiqiza ngobuningi. Zinokusetshenziswa okuhlukahlukene.
Ishidi ngokwezifiso laser ukusika izingxenye-ngokunemba ishidi lensimbi laser ukusika ukucubungula imishini izingxenye
Ukucubungula kusetshenziswe kabanzi kuzinto zikagesi, ezokuxhumana, imboni yezimoto, imishini yezokwelapha neminye imikhakha. Isibonelo, ezimweni zamakhompiyutha, omakhalekhukhwini, ne-MP3, ishidi lensimbi liyingxenye ebaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, isetshenziselwa ukukhiqizwa kwamadivayisi wezokwelapha, kanye nemizimba yemoto neloli (amaloli), izindiza zezindiza namaphiko, amatafula ezokwelapha, uphahla lokwakha (ukwakhiwa) nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi.
Izinzuzo ze-Shanghai Ouzhan sheet metal laser cutting automation izingxenye
● Ukusika i-Laser kunezinga eliphakeme lokuguquguquka, isivinini sokusika okusheshayo, ukusebenza kahle kokukhiqiza, nomjikelezo wokukhiqiza womkhiqizo omfushane. Noma ngabe izingxenye ezilula noma eziyinkimbinkimbi, ingasetshenziselwa ukwenza prototyping okusheshayo nokusika nge-laser;
● Umthungo wokusika omncane, ikhwalithi yokusika enhle, izinga lokuzenzakalela eliphezulu, ukusebenza okulula, umfutho wabasebenzi ophansi, futhi akukho ukungcola;
● Ingakwazi ukubona ukusika okuzenzakalelayo nokufaka izidleke, okuthuthukisa izinga lokusetshenziswa kwezinto ezibonakalayo, akukho ukugqoka ithuluzi, nokuzivumelanisa nezimo okuhle kwezinto;
● Izindleko zokukhiqiza eziphansi kanye nezinzuzo ezinhle zezomnotho.
Kwenziwe ngentando zethusi ishidi lensimbi laser cutting umshini izingxenye
Izinto Ipuleti elibandayo elibandayo, ipuleti lashukumisa, insimbi engagqwali, i-aluminium emsulwa ne-aluminium ingxubevange, ithusi elihlanzekile nensimbi yethusi, insimbi engagqwali yokwenza ubuchwepheshe
Ukwelashwa komhlaba Ukwelashwa ngaphezulu kwenziwa ngokuya ngezimpawu zezinto zokusetshenziswa nezidingo zamakhasimende ukufeza imiphumela emihle nehlala isikhathi eside.
Inqubo eyinhloko Ishidi metal eguqa ukucutshungulwa
Ukusetshenziswa Ukusika i-Laser, i-laser drilling, i-laser welding, ukwelashwa kwe-laser, ukumakwa kwe-laser, ukwelashwa kwe-laser ukushisa, i-laser prototyping esheshayo, i-laser imaging ne-laser coating konke kungacutshungulwa e-Ouzhan.
Langaphambilini Umakhi wensimbi izingxenye laser ahlabayo
Olandelayo: Ikhwalithi ephezulu ye-OEM sheet laser cut cut izingxenye